5 Inoshungurudza Zvishandiso zveIoT mune Retail - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Indaneti yezvinhu,, IoT, IoT Anwendung, chitoro, Zvitoro zvekutengesa, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
5 Pathbreaking Zvishandiso zveIoT muRetail
Iyo indasitiri yekutengesa ndiyo yave iri nzvimbo yezvakawanda zvitsva. Kwemakore apfuura isu takaona iyo indasitiri ichifamba ichibva kune inoshungurudza vatengi zviitiko kune otomatiki chatbots uye e-commerce. Nhasi vatengesi vanobata kwete chete zvitoro zvavo zvezvitina nedhaka asiwo online zvitoro, kushambadza, kuendesa, mabatiro evatengi nezvimwe. Nemabasa mazhinji aripo, panogara paine kudiwa kwehunyanzvi hwekugadzira matekinoroji anokwanisa kugadzirisa mafambiro uye kubatsira mukushandisa zvirinani zviwanikwa. Pakati pese mhinduro dzeIT internet yezvinhu (IoT) yabuda senge tekinoroji ine simba kwazvo. Mune ino blog, isu tichafunda nzira shanu dzekunyatso shandisa IoT mukutengesa.
IoT zvishandiso semasensor eindasitiri, akabatana kugadzira michina, mu-chitoro ongororo zvishandiso uye nzvimbo yekushandira manejimendi mhinduro dziri kutotenderedzwa zvakanyanya mumusika. Sparklabs inofanotaura kukura kwekujekesa munzvimbo yeIoT-kubva pamamirioni mazana maviri nemazana mashanu emamiriyoni muna2.5 kusvika 2017 bhiriyoni muna5.4.
Cloud computing yanga iri mugonesi wezvese zvakakura zvitsva muindasitiri yezvitoro. Kunyange zvizhinji zve IoT zvishandiso vimba ne cloud infrastructure kuti ishande nemazvo. Dhawunirodha kana yemahara eBook kuti uzive zvakawanda nezve maitiro e gore kadambari mune zvekutengesa:
Cloud Computing muRetail
5 Nzira dzeKunyatso Kuburitsa Internet yezvinhu muRetail Indasitiri:
1. Zvirinani Geo-Kuchengeta:
Geo tracking haisi pfungwa itsva. Muchokwadi, hauzodi zvemhando yepamusoro IoT zvishandiso kuronda nzvimbo yezvaunotumirwa. Saka IoT inoita mutsauko sei? Patinosanganisa Indaneti zvinhu nemaGPS masisitimu isu tinogona kuteedzera iko iko kwekutumirwa kune yakawanda yakawanda granular level. Maseru eIoT anogona zvakare kubatsira kuteedzera mamiriro ekutumirwa uye kukanganisa kwenzvimbo yekunze senge tembiricha, iyo nguva inotorwa mukuendesa nezvimwe pahunhu hwayo. Izvi zvinonyanya kubatsira kana uchitarisira kutakurwa kwezvinhu zvinoparara uye zvinonaka.
Read More: Mhedzisiro yeIoT pane Logistics
2. Yemunhu Meseji:
Kune vanhu vanobatanidzwa muIoT hunyanzvi mune zvekutengesa mabhekoni uye geofencing hadzisi pfungwa itsva. Asi kana uchangotanga kuongorora mamiriro e Indaneti zvinhu mune zvekutengesa saka iwe unofanirwa kunyatso tarisa iko kushandiswa kwe geofencing. Nekushandisa maBluac beacon, RFID kana maWi-Fi network vatengesi vanogona kumutsa nzvimbo yakatarwa yekutengesa mameseji kana tarisiro inopinda kana ichisiya yakatarwa nzvimbo yemuganhu. Izvi zvinobvumidza kune yakasarudzika mvumo-yakavakirwa kushambadzira uko kune chaiko kukosha mumashoko ekutengesa.
Read More: Iyo Big Data, AI uye ML inobatsira sei kugadzirisa ruzivo rwevatengi?
3. Inoshanda seHwaro hweMBA:
MBA pano inomirira musika tswanda ongororo. Iyo idhizaini yekuongorora data inoshandiswa kufanotaura zvichazotengwa mune ramangwana zvichibva pane yapfuura cheki uye zvinhu zviri mungoro. Kuti uite ongororo yakakodzera yemusika webhasiketi, iwe unoda data nezve maitiro ekutenga kwevatengi. Zvinhu zvavanotenga, kufamba kwavo kubva kune chimwe chikamu chezvinhu zvechitoro kuenda kune chimwe, maitiro avo ekuchinja muchitoro nezvimwe. Dhata rakadaro rinogona kutorwa uchishandisa IoT zvishandiso se sensors mumotokari dzekutengesa, RFID tags muzvinhu, nharembozha etc. Uchishandisa izvi zvakacherechedzwa, unogona kugadzira dhizaini yechitoro inotungamira vatengi kune zvigadzirwa zvinoenderana nekutenga kwavo.
Read More: Nzira Nhanu Dziri Kuwedzera Kwechokwadi kuri Kuchinja Kumeso Kwekutengesa
4. Inventory Kugadziriswa:
Kunyatso gadzirisa stock ndicho chimwe chinonetsa mubhizinesi rekutengesa. Nepo iyo yechinyakare poindi yekutengesa masisitimu (POS) inongotarisa pahuwandu hwezvinhu, IoT yakagonesa RFID tag inogona kupa mamwe akawanda akaoma kunzwisisa. Ruzivo urwu runogona kusanganisira tembiricha, mamiriro, kukuvadzwa kwechigadzirwa etc. IoT sensors inogona zvakare kukuzivisa iwe nezve kukanganisa kwekutengesa kwekuisa chinhu chimwe chete munzvimbo dzakasiyana. Kushandisa tekinoroji yeRFID yepamusoro kunodzivirirawo kuba muzvitoro uye kuona zviri nani chibatiso.
Read More: Retail uye Technology
5. Kufanoziva Kugadziriswa Kwemidziyo:
Muchitoro chaicho chechitoro, kune zvakawanda zvemidziyo zvinoda kugadziriswa nguva nenguva uye kugadzirisa. Nekushandisa maIoT sensors mune izvi zvishandiso tinokwanisa kuongorora miniti shanduko mukushanda kwavo uye titange nekukurumidza kugadzirisa kuti tirege kushanda zvisina kunaka. Refrigeration zvikamu muenzaniso wakajairika wemidziyo yakadaro. Kana aya mayunitsi akaitwa akachenjera achishandisa IoT unogona kutarisa shanduko mukushisa, kushanda uye kukanganisa kweshanduko pazvinhu zvakachengetwa. Kana paine kutadza kushanda kwakacherechedzwa saka kugadzirisa kunogona kurongwa nekukurumidza uye kubuda kwechimbichimbi kunogona kudzivirirwa.
Sezvawaona iyo Indaneti zvinhu inogona kushandiswa nenzira dzakawanda dzinoshanda nevatengesi. Nehurombo, mwero wekugamuchirwa kwezvigadziriso izvi hauna kuwedzera sezvaitarisirwa. Vatengesi vazhinji vanopokana nezve mabhenefiti chaiwo kubva kumidziyo iyi. Zvechokwadi, kana yakashandiswa zvakanaka IoT zvishandiso inogona kuve yako yemakwikwi mukana muindasitiri. Muboka revatengesi vekare, nzira yevatengi inosungirwa kumira.
Kana iwe uri kutsvaga Developers ndiani anogona kuumba mazano ako kuita mhinduro dzinoshanda saka wave panzvimbo chaiyo. At NewGenApps, isu tinoshanda mukuvandudza zera idzva IT mhinduro kune vatengesi. Taura nesu nhasi kuti ubvunze chirongwa kana POC.
Wepamusoro 8 IoT App Kuvandudza Maitiro eGore 2022
Oct 14 | IoT, IoT Anwendung